Crown Education | Yangon Myanmar
HomeCrownAbout UsCROWN’S AWARDSStudent TestimonialsServicesUniversitiesStudy in HOLLANDStudy in MALAYSIAStudy in AUSTRALIAPre MASTERSStudy in UKStudy in USAStudy in SingaporeStudy in NEW ZEALANDGUIDE TO UK UNIVERSITIESStudy in THAILANDUseful InfoUnaccredited InstitutionsPathway ProgramsGlobal Assessment CertificateNCUK International Year OneGAC Pathway UniversitiesGAC in MyanmarNewsGalleryPhoto GalleryContact UsEDU EXHIBITION 2017FAQs Masthead
Crown Education CROWN Education CROWN Education CROWN Education Crown Education CROWN Education team has first-hand experience balancing the needs... About Us
CROWN Education ကို ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ် တွင် သက်တမ်း (၁ဝ) နှစ်ကျော် အတွေ့ အကြုံရှိ Education Consultant များဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နိုင်ငံ တကာမှ ဆုတံဆိပ် အများ ဆုံးရရှိထားသော ပညာရေး အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်၊၊
Read More Latest Photo
"နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် စီးပွားရေးပညာ ရပ်များ၏အရေး ပါမှုအခန်းကဏ္ဍအကြောင်းဆွေးနွေးမည်"
Submitted by manager on Thu, 08/28/2014 - 15:08 စင်ကာပူနိုင်ငံ Singapore Institute of Management ၏ Lecture တစ်ဦးဖြစ်သော Mr. Read more about "နိုင်ငံတကာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် စီးပွားရေးပညာ ရပ်များ၏အရေး ပါမှုအခန်းကဏ္ဍအကြောင်းဆွေးနွေးမည်"
Program GAC in Myanmar
Read more about Program GAC in Myanmar
The Global Assessment Certificate™ (GAC) program
The Global Assessment Certificate™ (GAC) program is an internationally recognized university preparation program for students who want to study atauniversity which uses English as its language of instruction. Read more about The Global Assessment Certificate™ (GAC) program
What is in the Global Assessment Certificate™ program? Read more about Global Assessment Certificate
The Global Assessment Certificate™ (GAC) program is an internationally recognized university preparation program for students who want to study atauniversity which uses English as its language of instruction. GAC Pathway Universities are located in Australia, Cambodia, Canada, Indonesia, Malaysia, Mexico, Singapore, Thailand, Trinidad and Tobago, the United Kingdom, the United States and Vietnam. Read more about GAC Pathway Universities
GAC in Myanmar
In partnership with American based ACT Education Solutions Limited, CROWN Education has launched American College Program (Global Assessment Certificate-GAC) on September 2013. Officials from ACT Education Solutions Limited has signedapartnership contract with CROWN Education. Read more about GAC in Myanmar
15 March 2017 Scotland ရဲ့ နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တွေထဲကမြန်မာကျောင်းသားများ ကြား ရေပန်းစားတဲ့ University of Glasgow (ရန်ကုန် - မတ်လ ၂၅) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■့ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာကိုသွားရောက်ပညာသင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ အရေအတွက်ဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာသလိုScotland ရှိ တက္ကသိုလ်တော်တော်များများမှာလဲမြန်မာကျောင်းသားတွေဟာတက်ရောက်နေကြပါတယ်။.Glasgow မြို့ဟာScotland ရဲ့နာမည်ကြီးမြို့ကြီးဖြစ်ပြီးမြို့တော်Edinburghနဲ့အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ မြို့တစ်... 15 March 2017 ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ BHMS ကျောင်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူ ပြီးသင်ယူလိုပါသလား (မန္တလေး - မတ်လ ၁၈) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် ဥရောပရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံBusiness & Hotel ManagementSchool (BHMS) ကျောင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့ဖြင့်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီများကိုသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ... 15 March 2017 “ဘွဲ့ တစ်ခုခုရထားပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေးလမ်းအကြောင်းများ” (ရန်ကုန်- မတ်လ ၁၆) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုဘွဲ့ရထားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ( အဝေးသင်ဖြစ်ဖြစ်/UFLကပဲဖြစ်ဖြစ်/ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖြစ်/ကွန်ပျူတာဘွဲ့/ ဆရာဝန်ဘွဲ့/ သမိုင်းဘွဲ့ / ပထဝီဘွဲ့ / Physic/ Chemistry)တွေ…. ခုလိုပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ …..ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ?.❑ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူများ အနြေ... CROWN Education has been awarded BEST AGENT (2010) & BEST PARTNERSHIP AWARD (2012)
CROWN Education is First Myanmar Agency awarded
with Distinction by British Council Myanmar.
Our Partner © Copyright 2014 by Crown Education. All Rights Reserved.